Jubbaland oo Amaro kusoo rogtay Goobaha Waxbarashada – Banaadir Times
Jubbaland oo Amaro kusoo rogtay Goobaha Waxbarashada
By banaadir 28th February 2021 86 No comment
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay habraaca hortagga soo laba kacleynta cudurka COVID-19 ee iskuulada iyo goobaha Waxbarashada degaannada Jubbaland.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa algu sheegay in Wasaaradda la socoto soo labo kaclaynta cudurka halista ah ee COVID-19, kaas oo saameeyey adeegyadii bulshada.
Sidoo kale Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland waxaa ay sheegtay in ay garowsatay khatarta cudurka COVID-19 uu ku yeelan karo adeegyadda waxbarashada iyo saameynta & imtixaanka shaahadiga ah ee dugsi sare iyo kan dhexe ee fooda nagu soo haya.
Ugu dambeyn Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay go’aamo looga horagayo faafitaanka Cudurka Coronavirus, iyada oo ay si caadi ah u furnan doonaan Goobaha Waxbarashada, waxaana Go’aamadaas kamid ah.
1) In maamulka iyo macalimiinta ay fuliyaaan habraacyadda ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka ee looga hortagayo cudurka COvID-19.
2) Kormeerka dugsiyada in ay xaqijiyaan dhammaan fasaladda dugsiyada ay xirtaan af-xirka si loo ilaaliyo badqabka ardayda iyo bulshadda
3) In fadhiga ardayda fasaladda uu noqdo mid kala fog inta suurta galka ah.
4) In albaabka hore dugsiga la dhigo qalabka lagu cabiro heer kulka jįirka.
5) In albaabka hore ee dugsiga iyo fasalada la dhigo qalabka faxalka lana amro ardaydu in sijoogta ahu isticmaalaan
6) In la sameeyo gudiyo wacyigelin oo ka kooban Maamulka, ardayda, iyo Wasaaradda waxbarashada.
7) In lagu korjoogteeyo fulinta habraacyadaan Maamulka iyo macalimiinta dugsiyadda
Heshiiskii ay todobaadkaan magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen Golaha Midowga Musharaxiinta mucaaradka ee Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wax weyn ka beddelay jawigii siyaasadda dalka.
Magacyada Xildhbaano laga joojiyay ka qeyb galka kulamada Golaha Shacabka
By banaadir 28th March 2021
By banaadir 27th April 2021